10 Inoratidzirwa Nzira dzekutyaira Traffic kune Yako Ecommerce Webhusaiti | Martech Zone
"Ecommerce Brands iri Kutarisana ne80% Yekukundikana Rate"
Kunyangwe izvi zviverengera zvinoshungurudza, Levi Feigenson akabudirira kugadzira $ 27,800 mumari mumwedzi wekutanga webhizimusi rake re-e-commerce. Feigenson, nemukadzi wake, vakaparura eco-inoshamwaridzika accessories brand inonzi Mushie muna Chikunguru we2018. Kubva ipapo, hapana kudzokera kumashure kune varidzi pamwe neyechiratidzo. Nhasi, Mushie anounza madhora mazana mana nemazana mashanu ezviuru mukutengesa.
Panguva ino yemakwikwi e-commerce zera, uko 50% yekutengesa iri kuenda kuAmazon, chivakwa chemotokari, uye shanduko iri padhuze nekusagoneka. Zvakadaro, vabati-musiki ve Mushie vakaratidza kuti hazvina kunaka uye vakagadzira nzira yavo kune isingamisi kukura. Kana vachigona kuzviita, newewo unogona kuzviita.
Zvese zvaunoda makwikwi ekukwikwidza akasanganiswa nemaitiro ekubata kutarisisa muchaunga. Iri gwaro rinounza maMhie e-commerce marongero akasanganiswa nemamwe matanho anobatsira kuti uwane traffic kune yako webstore ine yakawanda mukana wekushandurwa.
Nzira gumi dzekutyaira Traffic Kune E-commerce Bhizinesi Rako
1. Invest in Kufuridzira Kushambadzira
Pakutanga, ini ndanga ndichinyora nezveGoogle Adwords, asi zvimiro zvinoratidza kuti vashandisi havawanzobaya kushambadziro sezvo vasingavimbe navo zvekare. Mazhinji ekudonha kwevashandisi anoenda kune ehupenyu, asina kubhadharwa zvinongedzo.
Kana isiri Google AdWords, saka ndeipi nzira inokurumidza yekuisa zvigadzirwa zvako pamberi pemamirioni?
Feigenson akasvika kumazana evakuru uye vashoma-vanokurudzira kusimudzira zvigadzirwa. Akatumira zvigadzirwa zvake kuna Jenna Kutcher, nevateveri mazana mana, naCara Loren, nevateveri mazana masere.
Mumwezve nyaya yekudzidza kweSilk Almond Milk yakashuma iyo brand yakaburitsa ka11 kwakakura Kudzoka paInvestment kubva kune inokurudzira kushambadzira mushandirapamwe zvichipesana nedhijitari yemabhana kushambadzira
E-commerce zvigadzirwa zvinofunga kukurudzira kushambadzira senge inodhura mari. Asi Feigenson anosimbisa pane chokwadi chekuti haufanire kutaura naKim Kardashian kuti ufambise izwi rezvigadzirwa zvako. Ehe, ichapwanya bhangi rako isina ROI zvachose. Pane zvinopesana, tsvaga niche vanokurudzira kuti vasvike kune akakosha vatengi kwete pane chero munhu. Makuru uye madiki-anopesvedzera anokwanisa kuwedzera e-commerce traffic ine gumi kagumi ROI.
2. Chinzvimbo paAmazon
Ndinoziva munhu wese ari kutaura nezve chinzvimbo paGoogle, asi Amazon ndiyo nyowani yekutsvaga injini yeE-commerce nzvimbo.
Sezvakaitika USA Nhasi inoshuma, 55% yeVatengi vepaInternet Vanotanga yavo Ongororo paAmazon.
Feigenson anopika neAmazon nekuda kwekuwedzera kwayo kutengesa kwemajitari. Kuzadzikiswa kweAmazon hakuna kungobatsira Feigenson kutarisira zvivakwa zvayo, asiwo kumupa mukana kune vateereri vatsva uye zvishandiso zvekushambadzira, senge Keyword Research, kuti ikure nekusingaperi.
Kunze kwezvinopihwa neAmazon, unogona kuhwina nekukurumidza kuvimba kwevatengi nekutora ongororo yechokwadi yevatengi vekare uye nekunyora tsananguro yakadzama yezvigadzirwa zvako.
Iye zvino usataure kuti Amazon ndiye mukwikwidzi wako. Kunyangwe kana zvirizvo, iwe unozodzidza zvakawanda nezve izvo izvo vashandisi vari kutsvaga uye kuti sei kuburikidza neAmazon data yevatengi.
3. Unleash Simba reSEO
Pano panouya iyo-yenguva-yega yavanofarira kushambadzira zano revaridzi vewebhu zvitoro Kubva pakuziva vatengi kunyora blog kusimudzira paAmazon kuisa # 1 paGoogle, SEO inoita chinzvimbo chakakosha padanho rega rega.
"93% yeTotal Web Traffic inobva kuInjini Yekutsvaga."
Izvi zvinoreva kuti SEO haidziviririke. Hazvina mhosva kuti kushambadzira kwemasocial media kukwira sei kumusoro, vashandisi vachiri kuvhura Google kutsvaga zvigadzirwa zvavanoda kutenga.
Kutanga neSEO, iwe unofanirwa kutanga neakakosha mazwi. Kutanga kuunganidza mazwi akakosha vashandisi akaiswa muGoogle kutsvaga zvigadzirwa zvakakodzera. Shandisa Google keyword planner kune rumwe rubatsiro. Kana iwe unogona zvakare kutora kuraira kubva kune yakabhadharwa chishandiso senge Ahrefs ye yepamusoro SEO matekinoroji.
Shandisai ese mazwi ako akaunganidzwa mumapeji ako echigadzirwa, ma URL, zvemukati, uye pese panodiwa mazwi. Ita shuwa kuti usagumburwe pane kiyi yekuisa zvinhu. Zvishandise zvakasununguka kuti ugare wakachengeteka kubva pazvirango zveGoogle.
4. Ronga Zvemukati
Iwe haugone kunyora chero chinhu, kushambadzira, uye tariro kune vateereri kuimba nziyo dzezvigadzirwa zvako. Zvakare, haugone kuvimba chete nezvinyorwa kuti uparidze kuziva nezve zvigadzirwa zvako. Zvemukati zvayambuka miganho yemashoko akanyorwa. Blogs, mavhidhiyo, mifananidzo, podcast, nezvimwe, zvese zvinoverengeka pasi pechikamu chemukati. Zvemukati zvemukati zvisikwa zvinokuvhiringidza iwe nezve izvo zvekugadzira, maitiro ekugadzira, uye kupi kwekutsikisa. Ndosaka zvirongwa zvemukati zviri zvekuchengetedza nguva yako uye nekugadzira traffic chaiyo kubva munzira chaidzo.
Chekutanga pane zvese, nyora pasi mafomati akasiyana ezvinyorwa zvaunoda. Semuenzaniso,
Zvinyorwa pamusoro pekushandisa uye zvakanakira zvigadzirwa
Kana chero chauinacho mudura.
Ipa iro basa kumunyori, dhizaini, kana chero ani anotamba chikamu mune zvemukati zvekugadzira maitiro. Isa mukomana mukutarisira kuti awane zvirimo panguva uye ubudise panzvimbo chaipo. Semuenzaniso, nyanzvi yeSEO inofanira kutarisira chinyorwa chinofanira kuburitswa pane bhurogu rekambani uye kusimudzirwa pasocial media.
5. Zivisai Referral Program
Ndichiri kurangarira mazuva apo Amazon yaive nyowani kune e-commerce, ichinditumira maemail ekuendesa saiti kushamwari dzangu mukutsinhana mari. Yaiva makore apfuura. Zano richiri mukati maitiro ezvitsva e-commerce zvitoro kana avo vanoda kukurumidza kubata. Muchokwadi, mune ino nguva yemagariro enhau uko kugovana iri tsika yezuva nezuva, munhu wese anofarira kuyedza mukana wekutambira madhora mashoma mukutsinhana kwekunongedzera masaiti kushamwari dzavo. Shamwari dzangu dzemagariro shamwari dzinozviita nguva dzese. Saka ndine chokwadi nezve iyi zano.
Email kushambadzira kuchine simba rekuba iyo show, kunyanya kune E-commerce saiti. Nekushambadzira kweemail, unogona kuunza zvigadzirwa zvitsva kune vako vatengi vekare kukurumidza traffic chizvarwa. Izvo zvinokutendera iwe kuparadzira kuziva kwewebsite yako. Email kushambadzira ndeimwe yeakakurumbira makwara ekusimudzira zvemukati, vatsva vanosvika, kana kudzikisira. Uye usakanganwa ngoro dzakasiiwa, uko vashandisi vanowedzera zvigadzirwa kungoro asi vasingatombotinya pakutenga. Nekutengesa neemail, unogona kutora vashandisi padanho rekupedzisira rekutenga chigadzirwa.
Heino muenzaniso weemail yevasiiwa ngoro vashandisi:
7. Set Up Social Zviratidzo
Vanenge 70% yeVatengi veVatengi vanotsvaga kuongororwa kwechigadzirwa vasati vatenga.
Kuongororwa kwechigadzirwa kunoitwa zvakapetwa kagumi kupesana nerondedzero yechigadzirwa uye kopi yekutengesa.
Zvemagariro humbowo chiratidzo chevatengi, kubva kune vatengi vekare, kuti vanogona kuvimba nechako uye chigadzirwa. Amazon yakazara nehukama hwehukama. Pamusoro pezvo, humbowo hwemagariro hunobatsira kune zvemukati zvakare, uchipa chikafu chekutsvaga enjini yezvinhu zvakawanda zvinogadzirwa nevashandisi.
Hazvishamise kuti, Amazon inokwira kumusoro kune zvakawanda zvezvigadzirwa zvayo.
Kutanga kuunganidza wongororo kunyangwe zvikatora mari shoma. Semuenzaniso, kupihwa vatengi vako vekare nekutumira wongororo nemifananidzo kana mavhidhiyo kuti uwane kukurumidza kukurumidza mumigwagwa uye kuhwina nekukurumidza kuvimba kubva kune vatengi vatsva.
8. Ratidza Kumusoro paSocial Media Channel
Zvemagariro midhiya ndiyo imba yechipiri yevashandisi.
Salesforce yakashuma 54% yemireniyoni vanoshandisa nzira dzezvemagariro kutsvagisa zvigadzirwa.
Kutaura nezvangu, Instagram ads (semavhidhiyo) zvinondikurudzira kuti nditenge chigadzirwa kana kunyorera kuve nhengo. Saka ini ndinogona kutaura kuti maficha enhau enhau anogona kuve mini-vhezheni yeako e-commerce chitoro. Gadzira zvitoro pane eruzhinji media chiteshi uko vateereri vako vanogara uye kutsikisa zvirimo zvakaringana. Mhanya kushambadza pamwe nekuparadzira kuziva uye kutyaira pakarepo traffic.
9. Isa Vanotengesa Zvikuru Mberi
Chikonzero changu chakakosha kusvetuka paAmazon yekutsvaga chigadzirwa kuona vatengesi zvakanyanya vane ongororo yepamusoro. Amazon yakavaka iyi ficha zvakanaka kwazvo. Ini ndanga ndichitsvaga yakanakisa coconut mafuta. Amazon yakandipa chikonzero chakanaka chekutenga kubva kumutengesi.
Neichi chinhu chega, ini handidi kuchera zvakadzika mune icho chigadzirwa chekutenga. Uye ini ndinowana nguva yakakwana yekuverenga wongororo pane chakakurudzirwa chigadzirwa.
Nokuratidza zvigadzirwa zvinotengeswa, unoratidza vashandisi izvo vamwe vari kutenga uye nei vachifanira kuzviedza. Iyo inzira yakasimbiswa yekuburitsa hanya kwako - kuvimba kwevashandisi kunowedzera, izvo zvinoita kuti vatore danho rekutenga.
Peta zvigadzirwa zvako uye bvisa zvigadzirwa zvinotengesa zvakanyanya. Varonge kuti vauye pamberi pese pavanoshandisa kutsvaga mazwi akafanana. Maka zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanyanya zvine zita senge sarudzo yesheni kana vashandisi vanokurudzirwa.
10. Govera Mahara Kutumira mushure meimwe Ganho
Isa muganho wakatarwa wekutumira mahara. Semuenzaniso, "Dhirivhari Yemahara pane Orders anodarika $ 10”Kana chero mutengo waunoda.
Iyi inoshanda zvakanyanya kana iwe uchida kusvika kune vashandisi kuti vawedzere zvimwe zvinhu kune izvo zvinyorwa pasina kuvamanikidza.
Dzese nzira dzataurwa pamusoro apa dziri nyore kushandisa. Dzimwe dzadzo dzinotora nguva apo vamwe vanogona kuuya muchiito nekukasira. Nyorera nguva shoma kutora mabasa izvozvi, uye isa timu yako kushandira zviitiko zvinotora nguva. Dzoka undiudze kuti ndeipi yaunonyanya kufarira. Shuwiro yakanakisa.
Tags: AmazonContent Marketingkutyaira kutendeukakutyaira traffice-zvokutengeseranaecommerceEmail Marketingkushambadzira kushambadziraorganic searchzvivabatsireseomumagariro uchapupu
Uscreen: Vhidhiyo Pane Kudiwa uye Native TV App Platform
Tinogona Kufadza Kuuraya Iyo Yekutarisisa Span Ngano?